रुपान्तरण (कथा) – Chitwan Post
दैवको कुदृष्टि नपरेको भए सिरूवाको सुन्दर झुपडी आकाशका ताराझैँ चम्किरहने थिए, आजसम्म पनि । भूकम्पको घाउले घायल नपारेको भए सिरूवा बास माग्दै शरणार्थीझैँ भएर राजधानी पस्ने पनि थिइन अवश्य पनि । कति सुन्दर थिए ती दिनहरु ! आमाबाको काखमा रमाउँदै वनपाखा डुल्दाखेरिको आनन्द सिरूवा आजसम्म पनि त्यो पलको स्मरण गरिरहन्छे । भूकम्पले सर्वस्व लुटेपछि भाग्यले बाँचेको जीवन बोकेर ओत लाग्न राजधानी छिरेकी सिरूवालाई राजधानीको महँगीमा गाँस, बास र कपासको जोहो गर्न कहाँ सजिलो थियो र !
एउटा पसलमा सानोतिनो नोकरी गरेकै भरमा सहरको महँगो कोठा बहाल, खानादेखि नानासम्म धान्नुपर्दा कति बोझिलो भएको छ उसको थाप्लो । भूकम्पले किचिएका गाउँबस्तीका अनुहारको स्मृति अझैँ मानसपटलबाट बिलाउन सकेको छैन उसको, तर पनि आफूजस्तै भाग्यले बाँचेकाहरुलाई हेर्दै मन शान्त पार्ने कोसिस गर्दछे सिरूवा ।
एकपटक मृत्युको अग्निपरीक्षाबाट उम्किएको यो जीवनलाई संघर्षपूर्ण तरिकाले जिउने साहस लिएर अटुटरुपमा आफ्नो पाइला चालेकी छे सिरूवाले । आफन्त र आफ्नो ठाउँबाट बिछोडिँदाको पीडाले मुटु कोक्काए पनि सम्हालिँदै विपत्तिमा पनि उपहार पाएको जीवनलाई फूलझैँ सुन्दर बनाउने आशमा बिरानु सहरमा नङ्ग्रा खियाइरही ।
जतिसुकै मेहनत गरे पनि सहयोगी हातहरु दिनेभन्दा घचेट्ने धेरै हुँदा सिरूवालाई सहरमा पाइला टेकेर उभिन कठिन भएको थियो । सहर कसैका लागि रहर होला, कसैका लागि सहर सुनौलो अवसर त कसैका लागि बाध्यता । यस्तै बाध्यता थियो सहर सिरूवाका लागि पनि । बाध्यताले सहर पसेर अवसरहरु खोज्न भौँतारिएकी सिरूवाको पीडालाई स्वार्थको संसार बोकेर डुल्ने लुटेराहरुको सहरले बुझेन ।
मान्छेको अन्तरमनको वेदना नबुझ्ने सभ्य मान्छे बस्ने सभ्य सहरमा निकै सभ्य भनौँदा मान्छेहरुसँग पैसाको पासोमा आफ्नो अस्तित्वलाई अल्झाउन विवश पा¥यो सिरूवालाई यो सहरको महँगीले । हरपल आफूलाई बेच्दै जिउनुपर्दा भाग्यले बाँचेको आफ्नै जीवनसँग आज उसलाई घृणा लाग्न थालेको छ । सिरूवा बसेकै घरको अपोजिट साइडको कोठामा छिमेकी मुलुक दक्षिणतिरको नागरिकजस्तो देखिने मान्छे पनि बहाल गरिबस्थ्यो । ऊ बिहान सबेरै उठ्थ्यो अनि छतमा बसेर योग र ध्यान गथ्र्यो, भजन सुन्दै गुनगुनाउँथ्यो पनि ।
सिरूवा प्रायः छतमा कपडा सुकाउन उक्लेकी बेला उसलाई ध्यानमग्न अवस्थामै देख्थी । घरभेटीहरु प्रायः डेरावालाहरु छतमा उक्लेको, बसेको खासै मन पराउँदैनथे, तर पनि किन हो कुन्नि त्यो मान्छेसँग घरभेटी यति राम्रो र नम्र व्यवहार गर्दथ्यो कि मानौँ ऊ कुनै ठूलो योगी वा ठूलो कार्यालयको ठूलो पोस्टको कर्मचारी हो ।
उसलाई देख्दा सिरूवालाई पनि लाग्थ्यो, यो त साधु र सन्त पो रहेछ कि क्या हो ! फेरि मनमनै सोच्थी ऊ, यदि यो मान्छे साधु र सन्त भए त मन्दिरतिर बस्थ्यो होला नि, किन बहाल तिरेर अर्काको घरमा बस्थ्यो होला र ?
एकपटक त्यसै घरको दोस्रो तलामा डेरा गरेर बस्ने दिदी र सिरूवा गफ गर्दै थिए, ठीक त्यसैबेला घरभेटीले भोजमा उसलाई निम्ता गर्न आएको थियो । उसले नम्र भएर भन्यो– माननीयज्यू, आज साँझ मेरो घरको भोजमा पाल्नुहोला है ।
ऊ पनि कोठातिर पस्यो र निम्तो गरेर घरभेटी पनि गयो । त्यसपछि सिरूवा र त्यो दिदी पनि दुवै छतमा उक्लिए, बिहानीको घामको राप लिन । लोग्ने विदेश गएको र केटाकेटी पनि नभएको त्यो दिदी प्रायः फुर्सदमै हुन्थी र फुर्सदमा उनीहरु खुब गफ गर्दथे । सिरूवाले दिदीसँग सोधी– दिदी, त्यो तल्लो कोठामा बहाल गरेर बस्नेलाई चिन्नुहुन्छ ? दिदीले हत्तपत्त भनिन् हाँस्दै– लौ है मोरी पट्याइहाल त्यसलाई, तेरो त भाग्य नै चम्केला, आफूलेले त विवाह नग¥या भए त लाइन मारिसक्थेँ पहिले नै ।
छ्या दिदी पनि, त्यसै जिस्किनुहुन्छ ? मैले त त्यसको बारेमा थाहा छ कि भनेर सोधेकी मात्रै थिएँ, अब दिदी मलाई नै जिस्क्याउन थाल्नुभयो होइन ? को हो त्यो, योगगुरू हो ? सिरूवाले भनी । केको योगगुरू हुनु त्यो, हाम्रो माननीयज्यू सांसद् हुन् मधेसतिरका । सानैदेखि कुसंस्कार हटाउनुपर्छ, समाज परिवर्तन गनुपर्छ भन्ने अग्रगामी सोच बोकेर त्यतिबेला पनि पहाडतिरको बाहुनीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेर पहाडिया र मधेसीबीचको तगारो हटाउने काम गरेको थियो । तर सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा भूमिगत हुँदा आफूलेले माया गरेको स्वास्नीलाई माइती पक्षले छुटाएर अन्तै विवाह गरिदिएपछि अत्यन्त मर्माहित भएको एउटा घायलप्रेमी हो ऊ । पछि युद्धविराम भयो, सरकारसँग शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकुहरु कति सेनातिरै समायोजन भएर राष्ट्रसेवामा लागे । उसलाई पनि पार्टीले चुनावमा टिकट दियो र आफ्नै गृहजिल्लाबाटै चुनाव जितेर सांसद् बन्यो । साँच्चै मर्माहत हुने लभस्टोरी पो रहेछ माननीयज्यूको, ल है केटी विचार पु¥याउनू बेलैमा, म पनि माननीयज्यूनी भनौँला नि भन्दै दिदीले साह्रै उल्याइन् सिरूवालाई ।
लौ है सिरूवा अब सोचविचार गर, मचाहिँ कोठामा लागेँ भन्दै दिदी तल झरिन् । सिरूवाचाहिँ अभैm छतमा उभिएर बिहानीको सूर्यको रापलाई न्यानो मानेर ग्रहण गर्दै उही उसकोे बारेमा सोच्न थाली । यो माननीय कस्तो कम्युनिस्ट होला ? टुप्पी फालेर, जनै प्mयाँकेर र चाडपर्वहरु बहिष्कार गर्ने कम्युनिस्टको भीडमा योचाहिँ कस्तो अचम्मको कम्युनिस्ट होला ? धर्मसंस्कृतिको कुरा गर्छ । टुप्पी राख्छ र जीउमा जनै भिरेर हिँड्छ । तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादीको एक होनहार लडाकु भूमिगत जीवन भोगेको, लडाइँका मोर्चाहरुबाट कयौँपटक मुस्किलले बाँचेको ऊ माननीय कम्युनिस्टको साह्रै मर्माहत पार्ने प्रेमकहानी पनि आफ्नै ठाउँमा छ ।
जुन प्रेमलाई उसले आजसम्म पनि भुल्न सकेको छैन । ऊ हरेक धर्मसंस्कृति र जातजातिको सम्मान गर्छ, प्रायः मन्दिर पनि पुगेकै हुन्छ । अझ हप्तामा एकदिन पशुपतिनाथको मन्दिर त नपुगेको कुनै हप्ता आजसम्म छैन । साँच्चै ऊ अन्य कम्युनिस्ट नेताभन्दा युनिक शैलीको लाग्छ । ऊ त्यही सोच्दछ, चाहे कम्युनिस्ट हुन् या प्रजातान्त्रिक व्यक्तित्व हरेकको आफ्नो संस्कृतिलाई सम्मान गर्नैपर्छ । विरोध संस्कृतिको होइन, संस्कृतिभित्रको कुरीतिहरुको गर्नुपर्छ, किनकि संस्कृति हाम्रोआफ्नो पहिचान हो ।
संस्कृतिबिना समाज र राष्ट्र सभ्य बन्न सक्दैन । आकार र रुप बदलेर कम्युनिस्ट बन्ने भए सबै कम्युनिस्ट भइसक्थे होलान्, मान्छे विचारमा कम्युनिस्ट हुनुपर्छ । अनेकौँ संघर्ष र पीडा सहेर आज देशको माननीय अवस्थामा आइपुग्दा पनि उसका शैली, व्यवहार सबै सामान्य नै छन् । उसले आजसम्म अभद्र व्यवहार कसैसँग पनि गरेन । राजनीतिको सहारा लिएर गुन्डागर्दी र बेइमानी कहिल्यै गर्न जानेन । ऊ हरेक किसिमले कुलतबाट पनि सधैँ टाढा नै रह्यो । दिदीसँगको कुरापश्चात् सिरूवाले पनि माननीयलाई निकै वाच गर्न थालेकी थिइन् । सिरूवाको मनमा साँच्चै दिदीले भनेको भूत सवार भएको थियो, माननीयलाई हात लिएर आफ्नो अभाव पूर्ति गर्ने र साथ रहने ।
सिरूवा साँच्चै अहिले निकै माननीयको हिँड्ने, बोल्ने हरेक क्रियाकलापमा निकै चासो दिन थालेकी छे । ऊ कहिलेकाहीँ कामुक नजर प्mयाँकेर माननीयलाई हेरिरहन्थी । बिचरो माननीय असहज मान्दै आफैँ परपर हट्थ्यो । आफ्नो कामबाट फर्कनेबित्तिकै ढोका लगाएर बस्थ्यो । माननीयले कतिबेला कोठाको ढोका उघार्ला र उसमा आफ्नो अभावले भरिएको जिन्दगीमा कृत्रिम उत्तेजना थुपारेर उसलाई आफूतिर चुम्बकझैँ तानौँ भन्ने धुनमा सिरूवा उसको कोठाको ढोकामा नजर बिछ्याउँथी ।
सिरूवाले आफूप्रति देखाएको व्यवहारलाई माननीयले बुझेको थियो । उसले सिरूवाको विडम्बनाालाई देखेको छ, त्यसैले उसले सिरूवाप्रति कुनै नकारात्मक भाव राखेन । गाउँ, घरपरिवार, भूमिगत जीवन, राजनीति र प्रेम अनि राजधानी सहर सबैलाई पार गर्दै जाँदा माननीयले हरेक परिवेशलाई बुझेको, देखेको अनि भोगेको छ ।
नारी वर्ग पलपलमा बाँधिनु र बेचिनुपर्ने बाध्यतालाई पनि उसले नियालेको छ, सहरमा । घरदेखि बाहिरसम्म नारीले भोग्नु परेको पीडालाई पनि माननीयले अन्तरहृदयबाट बोध गरको छ । त्यसैले पनि ऊ नारी वर्गलाई अत्यन्त सम्मान गर्दछ । राजधानीभित्रका हरेक मान्छेका कमीकमजोरीलाई विश्लेषण गर्न गल्लीहरुमा आमनागरिकजस्तै भौँतारिदै डुलेको छ माननीय । कहिल्यै अत्यन्तै सामान्य नागरिकजस्तो बनेर गल्ली गल्ली डुल्दथ्यो त कहिले वास्तविक परिवेश बुझ्न सामान्य रुप धारण गर्दै रेस्टुराँ र बारहरुमा पस्दथ्यो । त्यहाँबाट उसले देखेको छ, कति अबला नारीहरु दारूको रंगमा लठ्ठिँदै शरीरको बिक्री गर्नुपर्ने विडम्बना !
एकदिन, एक रात, एक घण्टा, एक मिनेट वा एक पल किन नहोस्, आखिर नेपाली चेलीहरु नाङ्गिएर बेचिन विवश हुन्छन् । आफ्नो जीवन गुजार्न ऊ मनमनै सोच्थ्यो– कस्तो तीतो यथार्थ छ, आफ्नो शरीर बचाउन पलपलमा आफ्नो भावनालाई मार्नुपर्ने । दारूको लत र केटीको तलतलबाट सदैव टाढा ऊ माननीय साँच्चै नारीहरुले हरेक पल बेचिनुपर्ने अवस्थाबाट दुःखित हुन्थ्यो ।
जबसम्म देशको अर्थतन्त्र फस्टाउँदैन तबसम्म गरिबी र अभावको मौका छोपेर नारी वर्ग र अन्य निमुखा वर्गलाई लुटिरहन्छ, यो स्वार्थी सहरले– ऊ विश्लेषण गथ्र्यो । सच्चा हृदयको माननीय कम्युनिस्ट आफूले देखेका महिलाहरुको विडम्बनाजस्तै सिरूवाको बाध्यतालाई पनि भित्रभित्रै बुझेर उसलाई सघाउने निर्णय गरेको थियो ।
सिरूवाको मनमनैमा कुरा खेल्न थाल्यो– राजनीतिज्ञहरु केटी भनेपछि मुन्टो नै टेकेर आउँछन् भन्ने सुनेकी थिई । तर, त्यो कस्तो माननीय हो जो कहिल्यै नजिकै पो पर्दैन केटीसँग । सिरूवा हररात उसैको बारेमा सोच्दै उसको कोठातिर हेर्दथी । बिहानको मिर्मिरे उज्यालो नहुँदै एकदिन भूकम्पले एकपटक फेरि सात्तो लियो । राजधानी बासिन्दाहरु चिच्याउँदै सडकतिर भाग्न थाले । निद्राबाट जुरूक्क उठेर सिरूवा पनि भाग्दै कोठाबाहिरसम्म आइपुगी ।
अर्को कोठाबाट माननीय पनि दौडँदै बाहिर आयो । अचानक दुवैको शरीर एकआपसमा ठोक्किन पुग्यो । राति कपडा पनि मिलाउन नपाएकी सिरूवाको अस्तव्यस्त कपडा शरीरमा देखेर माननीय आफैँ लज्जित भयो । ऊ आफैँ हत्तपत्त दौडिएर कोठामा पसेर ढोका बन्द गरिहाल्यो । सिरूवा पनि लुगा मिलाउँदै कोठाभित्र पसेर मीठो मुस्कानसहित पुनः ओछ्यानमा पल्टिई । बाहिर भूकम्पको त्रासले भाग्नेहरुको भने चर्को होहल्ला अझै थियो ।
एकदिन माननीयज्यू साविकभन्दा अल्लि चाँडै आएका रहेछन् । छतमा उभिएर कसैसँग फोनमा कुरा गर्दै थिए । सिरूवा पनि अल्लि छिटै त्यसदिन फर्केकी थिई र आफ्नो बिहान धोएर सुकाएका कपडाहरु लिन छतमा पुगेकी थिई । माननीयज्यूलाई फोनमा मस्त देखेर सिरूवाको शरीर खुसी र उत्तेजनाले फुरूङ्ग भयो । उसले सोची– आज त माननीयज्यूले मलाई नजिकबाट नियाल्दै आफ्नो आँखा चलाउँदै अनि दिलभित्र पनि राख्छन् होला, सायद हिजो भूकम्पको डरले भाग्दा ठोक्किएको आनन्द उनको मनले भुल्न सकेको छैन होला ।
माननीयलाई हेर्दै छिटोछिटो कपडा उठाएर हातमा लिई अनि छतमै उभिईरही सिरूवा पनि । जिन्दगीको चरम आनन्द पाएझैँ भएको थियो सिरूवालाई आज । माननीयज्यू पनि फोनमा कुरा छिटो सकेर सिरूवातिर अघि बढ्दै थियो । सिरूवा अझै उत्तेजित नजरमा माननीयको आफूतिरको आगमनलाई उत्तेजित र कामुक नजरले नियाल्दै थिई । जब माननीय उसको सामुन्ने आएर टक्क उभियो, सिरूवाको मुटु ढक्क फुलेर आयो । त्यसपछि माननीयले उसलाई बैनी भनेर सम्बोधन ग¥यो ।
त्यसपछि सिरूवाको उत्तेजना र मायाका पालुवाहरु हावाले हुत्याएर लगेझैँ भयो । सिरूवाको उत्साहका तरंगहरु एकाएक आवेगमा हल्लिन पुगे । माननीयले नम्र स्वरमा भने– बैनी, तिमीलाई एक्लै देख्थेँ । तिम्रो एक्लोपनले गर्दा हो या समस्याले गर्दा हो आजभोलि मैले तिम्रा प्रत्येक हेराइमा तिमीले सामीप्यता खोजेको महसुस गरेँ । त्यसैले बैनी, स्वार्थले भरिएको सहरमा तिमीले कोहीसँग साथ लागेर मेहनत गर्दै गयौ भने यहाँ सेटल हुन सजिलो हुन्थ्यो । जहाँ जन्मिए पनि एउटै घरमा बसेपछि आफन्त हुँदोरहेछ, मैले तिमीलाई बैनी सोचेर तिम्रो भलाइको सल्लाहमात्रै दिएको हुँ ।
माननीयको आफूप्रतिको सल्लाहले सिरूवाप्रति उसको कस्तो धारणा रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट थियो । जब कि, सिरूवाको नजरले माननीयसँगको संसार देख्न थालेको थियो । मरूभूमिमा तातिएको बालुवाजस्तै सिरूवाको तनमन एक्कासि तातेर उम्लिन थाल्यो र शब्दको झटारोले हान्न थाली माननीयलाई ।
तपाईं माननीयहरुलाई सल्लाह दिनबाहेक केही गर्न आउन्न होइन ? माननीयज्यू त अचम्मको कम्युनिस्ट पर्नुभएछ, जताततै महँगी र अभावको समस्या देखाउनुहुन्छ, जनतालाई जनै र टुप्पी फालेर चाडपर्व बहिष्कार गरेको नाटक गर्दै चाडपर्वको भत्ता हसुर्नुहुन्छ, अझै फुइँ लगाउँदै हामी जनताको पक्षमा हौँ भनेर किन भाषण ठोक्नुहुन्छ ?
जनताका घरमा हरेक चाडपर्व अभाव र पीडा बनेर बिझाउँदा पनि आफूचाहिँ जनताकै पैसामा मोजमस्ती गर्दै चाडपर्व बहिष्कार गरेर वास्तविक कम्युनिष्ट भएको घोषणा गर्नुहुन्छ, होइन माननीयज्यू ? घरभाडा, पानी, बिजुली, यातायात खर्च सबै हसुर्न पाउनुभएकै छ, तलबबाहेक पनि तपाईंहरुलाई केको महँगी र अभावको बोध हुन्छ र !
वास्तविक कम्युनिस्ट बन्नुछ भने जनताको पीरमर्का बुझेर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार र सिमानालाई बलियो पार्नुहोस्, धर्मको नाममा हुने शोषण र दमनलाई निर्मूल पार्नुहोस्, जनताको पसिनामा परजीवी भएर टाँसिएका तपाईंहरुलाई के थाहा वास्तविकता, जनताको व्यथा । कहिले द्वन्द्व त कहिले भूकम्प, हरक्षण दुःखको सामना गरेको मसित अभाव के हो ? पीडा के हो ? दुःख के हो ? सिकाउने र सल्लाह दिने माननीयज्यू यो तपाईंको सदन होइन र फुर्सद पनि छैन मलाई तपाईंको सल्लाह, सुझाव र भाषण सुन्ने, किनकि तपाईंहरुजस्तो अरुको पैसामा बाँचेको मान्छे होइन म, आफैँ जसरी पनि बाँच्छु र बाँच्नका लागि केही गर्नुछ र दालभात, डुकुको समस्या टार्नुछ, बुझ्नुभयो ?
माननीय महान् कम्युनिस्ट सांसद्ज्यूलाई सिरूवाले रिस र पीडाका शब्दले नराम्रोसँग झटारो हानेर कोठातिर गई । अभावको पीडा र वेदनाले घायल भएकी सिरूवाको मनले आज यथार्थ ऊसँग ओकलेको थियो, जुन कुरा उसले बुझेको छ । बास्तवमा जनताको पीडा सिरूवाजस्ता हरेक नारीको पीडालाई देखेको उसले सिरूवालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सल्लाह दिएको थियो, तर त्यसले त सिरूवाको उल्टै रिस र पीडा मन–मस्तिष्कमा उचालियो । सायद आवेगमा आएर सिरूवाले मसँग यस्तो व्यवहार गरिन्, भोलि कुरा गरौँला नि भन्दै माननीयले आफ्नो मन बुझायो र छतबाट सहरलाई एकदृष्टिले नियालिरह्यो, जहाँ मानिसहरु आवतजावत र सवारीसाधनहरु एकतमासले आफ्नै गन्तव्यमा दौडिरहेका थिए ।
आज रातभरि सिरूवालाई किन हो निद्रा नै लागेन । मनमा आफूले माननीयज्यूसँग गरेको रिसालु व्यवहार र उसको निश्चल तथा सहयोगी स्वभाव देखेर सिरूवाको मनमा कुराहरु खेल्न थाले । कतै मैले माननीयसँग अभद्र व्यवहार त गरिनँ ? आखिर उहाँले मलाई बैनी सोचेर सल्लाह दिएको त होला नि ! मै मूर्ख र लालची रहेछु, उहाँसँग अनेकौँ आशा राख्ने । आखिर यो लुटेराहरुको सहरमा मलाई आफन्त सम्झेर सल्लाह दिने आजसम्मको पहिलो व्यक्ति उहाँ नै त रहनुभएको रहेछ नि !
यस्ता अनेकौँ विचारहरु मडारिएर उसको मनमा खैलाबैला मच्चिन थाल्यो । त्यसपछिका दिनमा उसले पहिलेको झैँ माननीयलाई नियाल्न छाडी । सिरूवालाई कता कता आफैँसँग लाज लाग्थ्यो, उसलाई देख्नेबित्तिकै । तल्लो तलामा बहाल गरेर बस्ने दिदीले एकदिन अचानक सोधिन्– के हो सिरूवा आजभोलि तैँले माननीयलाई हेर्नै छोडिस् कि उसको तँसँग पनि ट्रयाजेडी परिसक्यो ? दिदीको ठट्यौली प्रश्नलाई पनि सिरूवाले बेवास्ता गरी मौन रहिन् ।
माननीयको नित्यकर्म बिहानको सधैँ उस्तै हुन्थ्यो योग, ध्यान, भजनकीर्तन त्यसपछि समाचार पढ्ने अखबारमा । एकदिन बिहानको योग, ध्यान, भजनकीर्तन सकेर माननीयज्यू छतमा उभिएर सूर्योदयको दृश्यलाई नियालिरहेका थिए । अचानक सिरूवा पनि उसको नजिक उभिएर सूर्योदयतिर नियाल्न थाली । माननीयले सिरूवाको अनुहारतिर फर्केर हे¥यो । सिरूवाको अनुहारमा देखिएको पश्चात्ताप भाव र विडम्बनामा पिल्सिएको खुसीलाई राम्रोसँग नियाल्यो र उसले आफ्नो हृदयबाट कुनै आक्रोश नदेखाई सफा मनले बैनी भन्दै सम्बोधन ग¥यो ।
माननीय साँच्चै स्वभावले नि माननीय हुन लायक नै थियो । उसले व्यक्त गरेको सद्भावले सिरूवालाई आफ्नो गल्तीको माफी माग्ने साहस मिलेको थियो । सिरूवाले माननीयलाई हेर्दै भनी– दाजु, यो बिरानो सहरमा स्वार्थले निमोठ्नेहरुको भीडमा मेरो आँखाले पनि तपाईंलाई त्यस्तै देख्यो र मैले तपाईं मेरो शुभचिन्तक भन्ने चिन्नै सकिनँ, मैले आवेगमा जे बोलेँ तपाईंसँग त्यसका लागि माफी माग्छु ।
माननीयले हाँस्दै भन्यो– बैनी, तिमीले गलत बोलेको होइन, त्यो त तिम्रो विडम्बना र यो समाजको यथार्थता आगो भएर निस्केको मात्र हो ।
यसरी नै समाजको यथार्थतालाई ब्युझाउँनैपर्छ । बैनी, मैले तिम्रो पीडालाई बोध गरेको छु, त्यसैले त म तिमीजस्ता सबैको शुभचिन्तक नै रहिरहन्छु । विगतका काम सम्झेर पश्चात्ताप गर्दै हिँड्ने होइन, अघिका पाइला पहिल्याउनुपर्छ बैनी– माननीयले भन्यो । उसले आफूसँग अलिकति पनि नराम्रो भाव नगरेको देख्दा सिरूवा पनि साह्रै खुसी हुँदै यो बिरानु संसारमा सदैव ऊबाट शुभचिन्तकको साथ मागी । माननीय पनि साह्रै खुसी भयो, सिरूवाको सकारात्मक व्यवहार र सोचप्रति । सायद, दुवैको खुसीमा खुसी मिसाउन र साथ दिन सूर्यले पनि जोडले आफ्नो तेज पृथ्वीमा छरिरहेको देखिन्थ्यो ।